You are here: Home / Ereyada ka timid Tifatiraha / Faallo / Waxsoosaarka Cuntada - Xagee Lahaa?
Waxaan maanta kaliya ku turjumay mid ka mid ah bandhigyada ugu wanaagsan ee slideshare ku saabsan wax soo saarka cuntada. waxaa lagu soo daabacay tirakoobka adduunka. Halkan waxaa ku qoran macluumaad qaar ka mid ah bandhigid cajiib ah:
wadarta wax soo saarka cuntada
koritaanka dadweynaha ee mustaqbalka
Boqolkiiba dhulalka loo isticmaalo beeraha
qashinka cuntada: laga bilaabo halka iyo inta uu le'eg yahay
saamaynta isbeddelka cimilada
I aamin! Waxay noqon doontaa mudnaantaada waqtiga daawashada bandhiggan!
Abuuritaanka Cunto mustaqbal leh oo mustaqbalka ah: Natiijooyinka Ku-meelgaarka ah ka Machadka Khayraadka Dunida (WRI)